आज शुक्रबारको दिन महालक्ष्मीको कृपा पाउन अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/आज शुक्रबारको दिन महालक्ष्मीको कृपा पाउन अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय !
धनकि देवी लक्ष्मीको यो मन्त्र (क्षीरदैय धनन्दाय बुद्धदायै नमो नाम: यशोदाय कीर्तिदाई धर्मदयाई नमो नमः) सम्पन्नता र वैभवको सबै चाहनाहरू पूरा हुन्छ भन्ने आस्थाका साथ जप गरिन्छ। यदि सम्भव छ भने लक्ष्मीको पूजाका लागि सादा र सफा सेतो लुगा लगाउनु पर्छ। लक्ष्मीको पूजा गर्नु अघि शुद्धताको विशेष ख्याल राख्नुपर्छ।
शुक्रबारको दिन , पाँच पहेंलो कौडाहरू र केही केशर र एउटा चाँदीको सिक्का पहेँलो कपडामा राखेर त्यसलाई आफ्नो पैसा र गहनाहरू राख्ने ठाउँमा राख्यो भने केहि दिनमा धनलाभ मिल्न सक्छ ।
धन लक्ष्मीलाई सेतो व्यंजनहरू जस्तै चामलको खीर र सकेसम्म दुधका व्यंजनहरू अर्पण गर्नुपर्छ । घरको ज्येष्ठ महिला, आमा वा घरको लक्ष्मीलाई सम्मान स्वोरुप सबैभन्दा पहिले उनीहरुलाई लक्ष्मीको प्रसाद दिएपछि अरुले ग्रहण गर्नु पर्छ ।